बाको स्थानमा देउवा होला त परिवर्तन ? - EKalopati
बाको स्थानमा देउवा होला त परिवर्तन ?
काठमाडौं । निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीलाई उनका प्रशंसकले बा भन्ने गर्दथे । अब उनको स्थानमा देउवा आएका छन् । बा र देउवा शब्दको अनुप्रास उस्तै सुनिने रहेछ । बाको स्थानमा देउवा आए पनि मुलुकमा केही परिवर्तन होला भन्ने आशा गर्ने अवस्था छ कि छैन त्यो भने महत्वपूर्ण हो ।नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीको सपथ लिएका छन्। मंगलबार बेलुका ८ बजेर २५ मिनेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले शपथ लिएका हुन्।
Previous articleओली भन्छन्, जनादेश मेरो पक्षमा परामादेश अर्काको ?
Next articleछोरी जन्मिएको भन्दै जन्मने बित्तिकै हत्या